Raad Raac News Online – Buracad Badeed laga soo dajiyay Garoonka Bosaso ((Daawo sawirada ))
Buracad Badeed laga soo dajiyay Garoonka Bosaso ((Daawo sawirada ))
Bosaso Office December 4, 2012 0
Waxaa Maanta garoonka Diyaaradaha Magaalada Bosaso laga soo Dajiyay shan ruux oo ku eedaysan Burcad Badeednimo kuwasoo in mudo ah ku xirnaa xabsiyo ku yaala Dalka Sycheles .
ragani ayaa sida diyaarad qaas ah waxaana Garoonka Bosaso kusugna wasiirka wasaarada ladagalanka Burcad badeed ,Taliyaha Ciidamada Asluubta Ee Puntland iyo xeer ilaaliyaha Maxkamada Darajada kowaad Ee Gobolka Bari.
Taliyaha Ciidamada Asluubta Puntland General Cali Nuur ayaa sheegay in ragani ay hordhac u yihiin tiro maxabiis ah oo ku xiran dalkaasi kuwasoo la filayo in dhawaan ay soo garaan Dalka soomaaliya gaar ahaan puntland .
Wasiirka Wasarada ladagalanka Burcad Badeeda ayaa ragani ugu baaqay in ay isla ilawaan falalkii ay horay ugu jireen waxaa uuna sheegay in la gaynayo xabsi u dhamaystiran wax walba lagana doonayo in bartaan diinta islaamka .
ragani Burcada ku eedaysan ayaa ku xukuman xabsiyo gaaray shan iyo taban sano ilaa labo iyo toban sano .